ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် စိတ်ဖိစီးမှုမရှိပျော်ရွှင်နေသူတွေရဲ့ အတုယူဖွယ်လျှို့ဝှက်ချက်(၈)ချက် - CeleLove
ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့၊ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့၊ အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရပြီး ဖြေရှင်းစရာပြဿနာတွေလည်း အများကြီးကြုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်တွေဘယ်လောက်များများ စိတ်မဖိစီးအောင်နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်သွားတာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း ဒီအထဲကရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေရှုပ်ရှုပ် စိတ်မဖိစီးအောင်နေတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အတုယူဖွယ် အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် …. ။
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းတဲ့လူတွေဟာ ကိုယ်မနိုင်တဲ့တာဝန်တွေကို မယူဘဲ ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲ တာဝန်ယူတယ်။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို အတင်းဖျစ်ညှစ်ပြီးမလုပ်နေဘဲ အကူအညီတောင်းသင့်ရင်တောင်းတယ်၊ ဘယ်သူ့အကူအညီမှမယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး တလွဲမာနထားတာမျိုးမရှိပါဘူး ….. ။
လူတစ်ယောက်က ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုသလို၊ အနားယူတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အနားယူတယ်ဆိုရာမှာ အိပ်ချိန်လုံလုံလောက်လောက်အိပ်တာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစားအသောက်တွေစားတာ၊ စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် အမူအကျင့်လေးတွေလုပ်တာမျိုးတွေကို ဆိုလိုပါတယ် …. ။
ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စရာပေးမယ့်အရာတွေကို ရှောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့ပြဿနာတွေကိုအရမ်းငြီးတွားလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကို အပျက်သဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကို ကြိုးစားချင်စိတ်ပျောက်အောင်၊ ပျော်စရာတွေပျောက်အောင်လုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော် …. ။
လူတိုင်းက အခက်အခဲတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့၊ ပျော်စရာတွေကိုဝေမျှဖို့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအရမ်းအများကြီးရှိတာထက် တကယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအနည်းစုရှိတာက စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်အောင်တားပေးနိုင်ပါတယ် …. ။
သင်ဟာ ကျောင်းတက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ရက်လေးတွေမှာ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနားနေရတဲ့အချိန်လေးတွေထားထားသင့်ပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေသွားထိုင်တာမျိုး၊ အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်၊စာအုပ်ဖတ်တာမျိုးလေးတွေပေါ့နော် …. ။
အားကစားတစ်မျိုးမျိုးလုပ်တဲ့သူ၊ အနုပညာတစ်ခုခုလုပ်တဲ့သူတွေက တခြားသူတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာလည်း ဒီလိုဝါသနာတစ်ခုခုရှိရင် ကြိုးစားကြည့်ပါ …. ။
ပြဿနာတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေဟာ တွေးရင်တွေးသလောက် ရင်မောစရာ၊ စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြသနာတစ်ခု၊ ဖြေရှင်းစရာတစ်ခုရှိလာရင် ဒီအရာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကလွဲရင် တခြားထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားပြီး မခံစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ …. ။
လူတိုင်းက ကိုယ်လိုချင်တာတွေချည်းပဲပိုင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မလိုချင်တဲ့အရာတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ လက်ရှိကိုယ့်မှာရှိနေတာကို တန်ဖိုးထားတတ်ရင် စိတ်ညစ်စရာတွေထိုက်သင့်သလောက်နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရည်အချင်းတွေဟာ သူများတွေတိတ်တဆိတ်အားကျနေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တန်ဖိုးထားတာက အဆိုးမြင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်အောင် ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်နော် …. ။
ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ စိတျဖိစီးမှုမရှိပြျောရှငျနသေူတှရေဲ့ အတုယူဖှယျလြှို့ဝှကျခကျြ(၈)ခကျြ
ဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့၊ ပြျောရှငျနိုငျဖို့၊ အဆငျပွပွေနေနေိုငျဖို့အတှကျ လူတိုငျးအလုပျလုပျကွရပါတယျ။ အလုပျလုပျတဲ့အခါ စိတျဖိစီးမှုတှကေိုရငျဆိုငျရပွီး ဖွရှေငျးစရာပွဿနာတှလေညျး အမြားကွီးကွုံရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အလုပျတှဘေယျလောကျမြားမြား စိတျမဖိစီးအောငျနတေတျဖို့လိုပါတယျ။ မဟုတျရငျ အလုပျနညျးနညျးရှုပျသှားတာနဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှဖွေဈပွီး အမွဲတမျး ဒီအထဲကရုနျးမထှကျနိုငျဘဲဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျလောကျပဲအလုပျတှရှေုပျရှုပျ စိတျမဖိစီးအောငျနတေတျတဲ့သူတှရေဲ့ အတုယူဖှယျ အမူအကငျြ့လေးတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ …. ။
စိတျဖိစီးမှုနညျးတဲ့လူတှဟော ကိုယျမနိုငျတဲ့တာဝနျတှကေို မယူဘဲ ကိုယျနိုငျသလောကျပဲ တာဝနျယူတယျ။ ကိုယျမလုပျနိုငျတာကို အတငျးဖဈြညှဈပွီးမလုပျနဘေဲ အကူအညီတောငျးသငျ့ရငျတောငျးတယျ၊ ဘယျသူ့အကူအညီမှမယူနိုငျဘူးဆိုပွီး တလှဲမာနထားတာမြိုးမရှိပါဘူး ….. ။
လူတဈယောကျက ကွိုးစားအားထုတျဖို့လိုသလို၊ အနားယူတတျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အနားယူတယျဆိုရာမှာ အိပျခြိနျလုံလုံလောကျလောကျအိပျတာ၊ ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးမှနျတဲ့အစားအသောကျတှစေားတာ၊ စိတျအပနျးပွစေမေယျ့ အမူအကငျြ့လေးတှလေုပျတာမြိုးတှကေို ဆိုလိုပါတယျ …. ။
ကိုယျ့အလုပျကိစ်စ၊ ကြောငျးကိစ်စတှနေဲ့ ရှုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုစိတျညဈစရာပေးမယျ့အရာတှကေို ရှောငျတတျဖို့လိုပါတယျ။ သူတို့ပွဿနာတှကေိုအရမျးငွီးတှားလှနျးတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ၊ ကိုယျလုပျနတောတှကေို အပကျြသဘောဆောငျတဲ့မှတျခကျြပေးတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျ့ကို ကွိုးစားခငျြစိတျပြောကျအောငျ၊ ပြျောစရာတှပြေောကျအောငျလုပျမယျ့သူတှနေဲ့ ဝေးဝေးနတောအကောငျးဆုံးပါပဲနျော …. ။
လူတိုငျးက အခကျအခဲတှကေိုတိုငျပငျဖို့၊ ပြျောစရာတှကေိုဝမြှေဖို့အတှကျ သူငယျခငျြးတှရှေိဖို့လိုပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှအေရမျးအမြားကွီးရှိတာထကျ တကယျရငျးရငျးနှီးနှီးပေါငျးလို့ရတဲ့ သူငယျခငျြးအနညျးစုရှိတာက စိတျဖိစီးမှုတှမေဖွဈအောငျတားပေးနိုငျပါတယျ …. ။
သငျဟာ ကြောငျးတကျနတောပဲဖွဈဖွဈ၊ အလုပျလုပျနတောပဲဖွဈဖွဈ ပိတျရကျလေးတှမှော တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေးနားနရေတဲ့အခြိနျလေးတှထေားထားသငျ့ပါတယျ။ စနေ၊ တနင်ျဂနှလေိုနမြေို့းမှာ ကိုယျကွိုကျတဲ့ကျောဖီဆိုငျလေးတှသှေားထိုငျတာမြိုး၊ အိမျမှာအေးအေးဆေးဆေးနပွေီး ရုပျရှငျကွညျ့၊စာအုပျဖတျတာမြိုးလေးတှပေေါ့နျော …. ။
အားကစားတဈမြိုးမြိုးလုပျတဲ့သူ၊ အနုပညာတဈခုခုလုပျတဲ့သူတှကေ တခွားသူတှထေကျ စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့မှာလညျး ဒီလိုဝါသနာတဈခုခုရှိရငျ ကွိုးစားကွညျ့ပါ …. ။
ပွဿနာတှေ၊ အကွောငျးအရာတှဟော တှေးရငျတှေးသလောကျ ရငျမောစရာ၊ စိတျညဈစရာကောငျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွသနာတဈခု၊ ဖွရှေငျးစရာတဈခုရှိလာရငျ ဒီအရာရဲ့ အရငျးအမွဈကဘာလဲ၊ ဘယျလိုဖွရှေငျးနိုငျမလဲဆိုတာကလှဲရငျ တခွားထှထှေထေူးထူးစဉျးစားပွီး မခံစားတာအကောငျးဆုံးပါပဲ …. ။
လူတိုငျးက ကိုယျလိုခငျြတာတှခေညျြးပဲပိုငျဆိုငျရတာမဟုတျပါဘူး။ မလိုခငျြတဲ့အရာတှလေညျး ပိုငျဆိုငျရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျလိုခငျြသညျဖွဈစေ၊ မလိုခငျြသညျဖွဈစေ လကျရှိကိုယျ့မှာရှိနတောကို တနျဖိုးထားတတျရငျ စိတျညဈစရာတှထေိုကျသငျ့သလောကျနညျးသှားပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့ပိုငျဆိုငျမှု၊ အရညျအခငျြးတှဟော သူမြားတှတေိတျတဆိတျအားကနြတေဲ့အရာတှဖွေဈနနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအရာတှနေဲ့ပတျသကျလို့ တနျဖိုးထားတာက အဆိုးမွငျစိတျကိုလြော့နညျးစပွေီး စိတျဖိစီးမှုတှမေဖွဈအောငျ ဟနျ့တားပေးနိုငျပါတယျနျော …. ။